असोज महिना कुन राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् असोज महिनाको मासिक राशिफल ! – Khabar Silo
काममा सफलता मिल्दै जाँदा उर्जा बढ्नेछ। नयाँ कार्य थालनी गर्ने मौका मिल्न सक्ला। स्रोत–साधन जुट्नुका साथै लामो समयदेखि रोकिएका काम बन्नेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रबाट धन लाभ पनि सजिलै मिल्न सक्ला। एक–अर्काको भावनाको ख्याल गर्न सके दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। साना-तिना कुराहरुमा बहस नगरेकै राम्रो रहला।
महिनाभर मानसिक तनाव रहने देखिन्छ। व्यस्तताले भरिपुर्ण रहने हुँदा स्वास्थ्य पनि खासै राम्रो नरहन सक्ला। सबै काम सोचेअनुरूप सहज ढंगले सम्पन्न हुन गार्है पर्ला। यधपी परिवारजनको सहयोग मिलेमा भने व्यवसायमा राम्रै प्रतिफल मिल्न सक्ला। महिनाको मध्य पछि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै सफलताका बाटोहरु खुल्दै जानेछन्।
महिनाको शुरुवातमा मानसिक तनाव बढ्नेछ भने पारिवारिक माहोल पनि बिग्रिन सक्ला। मनमा बिना कारण भय पैदा हुँदा सोचे अनुरुप सकिय हुन सकिने छैन। आर्थिक पक्ष सन्तोषजनक नभएता पनि महिनामा खासै आर्थिक सङ्कट भने टरेर जाने देखिन्छ। पारिवारिक जमघट हुन सक्ला। धार्मिक यात्राले मन शान्त बनाउन मद्दत पुर्याउने देखिन्छ।
प्रायः कामहरु व्यवस्थित ढंगले पूर्ण सफल रहनेछन्। रोकिएका कार्यहरु पनि सुचारु हुनेछन्। पारिवारिक रुपमा रहेका समस्याको पनि हल निस्किने देखिन्छ। सुखद यात्राले खुशी जगाउन सक्ला। साथीसंगीहरूसित रमाइलो जमघट हुनसक्छ । कुनै कुरामा प्राप्त सफलताले मन रमाउनेछ । तर शत्रु भने सक्रिय हुन सक्लान्। बोल्दा पनि बिचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ।
परिवारको लागि समय साथै धन खर्च हुने देखिन्छ। कठोर अभिव्यक्तिको कारण सम्बन्ध बिग्रिन सक्लान्। टाउको, आँखा एवं पेटमा समस्या देखा पर्न सक्ने हुँदा स्वास्थ्य प्रति संयम भएको उचित हुन्छ। आलोचना बढ्नुका साथै आफ्नै भनिएकाहरुसंग विवाद हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। यधपी धार्मिक रुपमा भने महिना धेरै शुभ देखिन्छ।
विशेष काम सफल हुनुका साथै धेरै समय देखिको मनोकामना समेत पूरा हुन सक्ला। आफ्नो कर्म क्षेत्रमा उन्नति गर्ने अवसर जुट्नेछ । प्रतिस्पर्धीमाथि विजय प्राप्त हुन सक्ला । सोचे अनुरुपको प्रगतिले उर्जा बढाउन सक्ने देखिन्छ। प्रेम साथै पारिवारिक महोस पनि सोचेअनुरुप रहन सक्ला। महिनाको अन्तिममा भने स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या देखा पर्न सक्लान्।
आफ्नै भनिएकाहरुबाट धोका मिल्न सक्ने हुँदा सजक रहनु उचित हुनेछ। टाढाको यात्रा सकेसम्म नगरेकै उचित रहला। कानुनी रुपमा समेत समस्या पैदा हुन सक्लान्। व्यवसायमा हुने बाधाको कारण महिनाभर आर्थिक समस्याले सताउन सक्लान्। धैर्यता गुम्दा आलोचनाको पात्र भैनेछ। सवारीसाधन देखि सावधान रहनु पर्ला। परिवारबाट भने राम्रै सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ।
महिना उत्साहजनक रहने देखिन्छ। धेरै समय देखिका सपना पूरा हुनेछन्। वैदेशिक यात्राको अवसर जुट्न सक्ला। स्वास्थ्यमा हुने सुधारको कारण पनि विभिन्न प्रकारका लाभ मिल्नेछन्। पारिवारिक खुसीका निम्ति खर्च बढ्ने भएता पनि आर्थिक सङ्कटले भने सताउने देखिँदैन। गर-गहना जोड्ने मौका समेत मिल्न सक्ला।
पारिवारिक माहोल उत्साहपूर्ण रहने देखिन्छ। आफ्नो इच्छानुसार किनमेल गर्ने मौका मिल्न सक्ला। स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ भने मानसिक रुपमा रहेका तनाव देखि पनि छुटकारा मिल्न सक्ला। आर्थिक लाभ राम्रै रहने भएता पनि खर्च अत्याधिक हुँदा संचित गर्ने मौका भने मिल्ने देखिँदैन। सकेसम्म आफ्नो कार्य आफै गर्ने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ। अरुको मुख ताक्ने बानिले अफ्ठेरोमा पार्न सक्ला।
महिना मिश्रित रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार आएता पनि जाँगर पनि रहने देखिँदैन। दैनिक काममा कमै मात्र जाँगर चल्ने देखिन्छ। धार्मिक, पारिवारिक कार्यहरुमा खर्च बढ्न सक्ला। नयाँ मौका मिलेता पनि समयमा निर्णय गर्न नसक्दा मौका फुत्किने देखिन्छ। प्रेमी-प्रेमिका बीच भने सम्बन्ध राम्रो रहन सक्ला। धेरै समय देखि भेट-घाट नभएकाहरुसँग आत्मीय भेटघाट हुन सक्ला।
महिना उतारचढावमय रहने देखिन्छ। आफ्नै कारण उदास भैनेछ। परिवारको माहोल सुखमय रहने भएता पनि भित्रैबाट मन भने खिन्न रहन सक्ला। जिद्दी गर्ने बानिले आफन्तजनहरुबाट टाढा गराउन सक्ला। आर्थिक रुपमा पनि महिना खासै शुभ नरहन सक्ला। खर्चमा नियन्त्रण राखेको खण्डमा भने सङ्कट टर्न सक्ला। धार्मिक कार्यले भने मनमा शान्ति जगाउनेछ।
दैनिक कार्यमा सफलता हात लाग्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा राम्रो समझदारी कायम रहनुका साथै हरेक कार्यमा सहयोग प्राप्त हुन सक्ला। आर्थिक एवं व्यावसायिक दुवै क्षेत्र सुदृढ रहनेछन् । आकस्मिक उपहार प्राप्त हुने पनि देखिन्छ। योजनाअनुरूप सबै काम सम्पन्न हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ला। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ।
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल साउन १ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२१ जुलाई १६ तारीख असार शुक्लपक्ष सप्तमी तिथी हस्ता नक्षत्र परिघ योग वणिज करण चन्द्रमां कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा अमृत योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण संक्रान्ति, दक्षिणायनारम्भ,देवपाटनमा गंगामाईरथयात्रा,सूर्यपूजा,थारु गुरियापर्व, बैतडी गुज्जर साउनेमेला सुरु,कण्डारकपूजा, लुतोफाल्ने (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, […]